Fialantsasatry ny fianarana
Ny fialan-tsasatry ny fianarana dia fialana amin'ny fanabeazana mpianatra iray ao amin'ny rafi-pampianarana avo lenta nefa tsy manala azy amin'ny mpianatra. Ny fialan-tsasatry ny fianarana dia azo omena amin'ny antony iray manan-danja sy manan-danja, voarakitra. Ny dimy na enimpolo taona amin'ny fianarana any amin'ny oniversite dia afaka maneho tsy ampoizina maro. Noho izany, ny vahaolana tsara indrindra, ny antsoina hoe fialana any an-tsekoly, ho an'ny mpianatra dia fialantsasatra amin'ny fianarana, ny anton'izany dia mety ho hafa. Noho izany, andao hijery akaiky kokoa ny fialam-boly akademika, ary inona no ilaina amin'izany.
Fialan-tsasatry ny fianaram-pianakaviana
Ny fialan-tsasatry ny fianaram-pianakaviana noho ny antony ara-pianakaviana dia mitaky fandalinana fianarana amin'ny antony manan-danja mifandray amin'ny fianakaviana. Izany dia afaka mikarakara havana marary, ka amin'izany dia tsy maintsy mampifanaraka amin'ny fangatahanao ianao hamela mari-pahaizana momba ny fahasalaman'ny marary, ary koa ny antontan-taratasy manamafy ny fifandraisanao.
Ny antony iray hafa dia mety ho ny toe-bola mahantra ara-bola eo amin'ny mpianatry ny mpianatra, ka voatery miasa izy. Eto, ilaina ny manamarina ny tsy fahampian'ny fiarovana ny fianakaviana mari-pankasitrahana avy amin'ireo masoivohom-piahiana ara-tsosialy, mari-pahaizana momba ny fidiram-bolan'ny ray aman-dreny, ary koa ny taratasy fanamarinana avy amin'ny toeran'ny mpianatra. Ankoatra izany, ny antony nodinihina teo amin'ny toe-javatra iainan'ny fianakaviana dia mety ho fifindrana, loza voajanahary ary ny hafa.
Ny fialàn-tsiny noho ny antony ara-pahasalamana dia omena amin'ny trangan'ny mpianatra ho marary mafy sy maharitra, izay tsy mamela azy hanohy ny fianarany. Mety hiteraka aretina mitaiza, aretina matetika, fahavoazana anatomika, aretina goavana mitaky fitsaboana maharitra.
Raha te hianatra vakansy momba ny fianarana ianao, dia mila mifandray amin'ny oniversite na institiota fianarana, izay hazavain'ny rehetra anao. Mba hanomezana ny fialan-tsasatra acadam noho ny aretina, ilaina ny mampiditra tatitra ara-pahasalamana na taratasy fanamarinam-panafarana mifanaraka amin'ny fangatahana. Ity taratasy fanamarinana ity, ary koa ny toetry ny fahasalaman'ny mpianatra, dia tokony hohamarinin'ny mpianatra polyklinique ao amin'ny oniversite, na toeram-pitsaboana iray manompo mpianatra.
Fialan-tsasatra ho an'ny bevohoka
Ny fialan-tsasatry ny fianarana vokatry ny fitondrana vohoka dia omena amin'ny mpianatra amin'ny fampiharana azy, ary koa ny taratasy fanamarinana manamarina ny vanim-potoanan'ny fitondrana vohoka. Amin'ity tranga ity dia afaka manoro hevitra ny fialan-tsasatry ny dokotera ny dokotera raha misy fahasarotana. Mba hanomezana fialan-tsasatra dia mila maka taratasy fanamarinana avy amin'ny dokotera ianao, izay nahatonga anao ho voasoratra anarana nandritra ny fitondrana vohoka, ary koa ny taratasy fanamarinana ny tsy fahafahana miasa ho an'ny fotoana sy ny famaranana ny komity manam-pahaizana ara-pahasalamana.
Ahoana ny fangatahana fialan-tsasatry ny fianarana?
Ny fanapahan-kevitra ny hanome fialan-tsasatra amin'ny institiota dia ny filoha na ny talen'ny sekoly fianarana. Ho azy Ny fanapahan-kevitra dia ilaina ny manoratra fampiharana iray ahitana ny antony voalaza, ary koa ireo fepetra ilaina ilaina. Ho an'ny fotoam-pianarana manontolo dia azo atao ny miala amin'ny fianarana amin'ny fianarana afa-tsy roa, mandritra ny taom-pianarana iray isaky ny taom-pianarana iray. Ny fanitarana ny fialan-tsasatry ny fianarana dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny tranga manokana sy miavaka. Ny fianarana akademika ao amin'ny sekoly fianarana diplaoma mandritra ny fe-potoana iray taona dia tsy omena. Mety ho fohy ny fotoana fialan-tsasatra amin'ny fandalinana noho ny antony marim-pototra.
Diniho ny fomba hialana amin'ny fianarana akademika. Raha te hody amin'ny fialamboliny ianao, dia mila fanambarana avy amin'ilay mpianatra momba ny fahavononana hanomboka ny fianarany, ary koa ny mari-pahaizana manamafy fa azo atao izany. Tranga tsy dia fahita loatra ihany koa ny fivoahana aloha avy amin'ny fialan-tsasatry ny fianarana, raha tsy amin'ny fankatoavan'ny mpitarika ny anjerimanontolo.
Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpampiasa vola avy amin'ny scratch?
Ahoana ny fomba hanananao mpanan-karena?
Coworking - inona no tiany hanokafana ivon-toerana iray?
Aiza ny fitarainana momba ny mpampiasa?
Inona no maha-manokana sy ny fomba hiditra manokana?
Ahoana no fomba hanadiovako ny palitao?
Nicolas Cage dia nandray anjara tamin'ny ady tena izy, niaro ny fananany!
Ahoana no handoavana ny lanjan'ny kibo?
Aterana ao an-trano avy amin'ny logs
Nisy ny tsipiriany vaovao momba ny fifandonana teo amin'i Johnny Depp sy ny mpitantana azy ara-bola
Ny pataloha ao anatiny
Ny tilikambo Viñacura
Fanafody hormona amin'ny menopause
Photoshoot amin'ny fomba fisainana an-dranomasina amin'ny natiora
Ahoana ny fomba hanamboarana brasele amin'ny elastika elastika eo amin'ny rantsantanana?
30 olomanga malaza, izay tsy manana voninahitra!
Pijama mamy ho an'ny zazavavy